Waayihii Nololeed Ee Wariyaha Sucuudiyaanka Ah Ee Lagu La' Yahay Dalka Turkiga
Thursday October 11, 2018 - 08:49:23 in Wararka by Abdi A.
Istaanbuul-(Caalami-News)- Sooyaalka xirfadeed ee Jamaal Khaashoqji wuxu ka soo bilaabmay sannadihii ugu horeeyey xirfadiisa ee uu bilaabay weriyenimada, waayadaas oo ay saaxiibeen Usaama Bin Laadin, ilaa uu haatan noqday qof mucaarad ku ah Sucuudiga
Istaanbuul-(Caalami-News)- Sooyaalka xirfadeed ee Jamaal Khaashoqji wuxu ka soo bilaabmay sannadihii ugu horeeyey xirfadiisa ee uu bilaabay weriyenimada, waayadaas oo ay saaxiibeen Usaama Bin Laadin, ilaa uu haatan noqday qof mucaarad ku ah Sucuudiga oo uu dalkana ka tagay.
Go’aankiisaasi waxa uu toos uga hor yimid siyaasadda Boqortooyada Sucuudiga oo kacdoonkii Carabta u arkaysay inuu khatar ku yahay jiritaankeeda.
Khaashoqji waxa kale oo uu aad ugu dhaliilay xukuumadda Sucuudiga go’aankii ay xidhiidhka ugu jartay Qatar, waxaanu ku tirtirsiyay Boqoortooyada in ay la safato Turkiga oo ay xulufo yihiin Qatar marka ay timaad siyaasadaha gobolka.
‘Putin buu iska dhigayaa’
[Khaashoqji oo ka hadlaya hab dhaqanka Maxamed Bin Salmaan ayaa wuxu qoray] "Waxaan gurigaygii, qoyskaygii iyo shaqadaydiiba uga firxaday waa in aan aragtidayda cabiray” waxaanu intaa ku daray "in aan waxa jira ka aamusaana waxay ila noqontay in aan khiyaamaynayo dadka jeelka ugu jira xorriyadda hadalka. Haatan waan hadli karaa oo waxaan haystaa fursad aanay dad badani haysan”.
”Waxaan leeyahay Maxamed Bin Salmaan sida Putin buu u dhaqmayaa oo caddaaladiisu waa la jiifiyaana bannaan” ayuu ku yidhi maqaal uu ku qoray Washington Post.